Matio 28 - Ny Baiboly
Matio toko 28
Ireo vehivavy teo amin'ny fasana - Ny nisehoan'i Jesoa taminy - Ny mpiambina voatambim-bola - Ny nisehoan'i Jesoa tany Galilea.
1Tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia lasa nitsirika ny fasana Maria Madelena sy ilay Maria anankiray. 2Ary indro nisy horohoron-tany mafy. Fa nisy anjelin'ny Tompo anankiray nidina avy tany an-danitra tonga teo, nanakodia ny vato dia nipetraka teo amboniny. 3Namirapiratra tahaka ny helatra ny tarehiny, ary fotsy tahaka ny oram-panala ny fitafiany. 4Ankona ny mpiambina nony nahita izany, ka nanjary tahaka ny maty. 5Dia niteny tamin'ireo vehivavy ny anjely nanao hoe: Aza matahotra hianareo; fantatro fa mitady an'i Jesoa izay nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana hianareo. 6Tsy ato izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avia ka jereo, fa teo no toerana nametrahana ny Tompo. 7Mandehana haingana milaza amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro hialoha anareo any Galilea izy; any no hahitanareo azy; izany àry, fa efa nilazako hianareo izay. 8Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra, lasa nihazakazaka hilaza amin'ny mpianatra. 9Ary indro Jesoa niseho taminy nanao hoe: Arahaba. Dia nanatona azy izy ka namihina ny tongony, sy niankohoka teo anatrehany. 10Dia hoy Jesoa taminy: Aza matahotra, fa mandehana asaovy mankany Galilea ny rahalahiko, fa any no hahitany ahy.
11Mbola teny an-dàlana izy ireo, dia indreny ny mpiambina sasany nankany an-tanàna, ka nilaza tamin'ny lohandohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra vao niseho. 12Dia novorin'ireo ny loholona ka rahefa niara-nidinika teo izy, dia nanome vola be ny miaramila, 13ary nilaza taminy hoe: Aelezo amin'ny olona fa tonga halina ny mpianatra nangalatra azy raha mbola natory izahay hoe; 14ary raha sendra ren'ny governora izany, dia izahay no hanony azy tsy haninona anareo. 15Dia nandray ny vola ny miaramila, ka nanao araka ny teny nomeny azy. Ary izany teny naelin'izy ireo izany no mbola inoan'ny Jody mandraka androany.
16Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo nankany Galilea, any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesoa halehany. 17Nony nahita azy izy ireo, izay nisalasala taloha, dia nitsaoka azy. 18Ary Jesoa nanatona azy ireo ka nilaza taminy hoe: Efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; 19koa mandehana hianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina; 20ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0083 seconds